Masedà fitsaboana mason-tsofina in ...
N95 fanamarinana masika fiarovana ...
[Type]: GM1-AM GM1-BM [Ampiasaina]: Ampiasao amin'ny zavona matevina sy setroka vita amin'ny fiara, lakozia, sns. [Fampitana]: Manisy mahomby amin'ny karazany rehetra amin'ny singa eny amin'ny rivotra. Mifanaraka amin'ny fenitra GB / T 32610 -2016. [Manana fanamarinana izahay]: FDA / CE [Duration]: Fandotoana malemy-40 ora, fandotoana antonony-30 ora, fandotoana mahery-20 ora, fandotoana mahery vaika-8 ora. [fanamarihana]: 1.Raha simba ny saron-tava, mangatsiaka na tsy mifoka rivotra tsara, avereno haingana ilay saron-tava. 2. Aza manova, manasa na manakalo ny fanariana ...
KN95 sarim-pianaran'ireo ankizy